काठमाडाै । हालै फ्रान्समा एक किलर व्हेल माछा भेटीएकाे छ । जसले मान्छेहरुको बोली “हलो” र “बाय-बाय” बोल्न सक्छ। मानिन्छ कि याे एउटा संसारकै पहिलाे यस्ताे ह्वेल हाे जसले मानिसकाे बाेलीकाे नक्कल गर्न सक्छ । फ्रान्सकाे मरीन पार्कमा एक प्रशिक्षकले उक्त व्हेललार्इ मानिसले सामान्यतया बाल्ने शब्दहरू सिकाएका थिए । जसले अहिले मानिसहरूकाे अावाल नक्कल गरेर बाेल्न सक्छ ।
सेन्ट एन्ड्यूजज विश्वविद्यालयका अध्ययन कर्ता डा. जोसेफ कलका अनुसार स्तनधारी जनावरले मानिसकाे बाेली नक्कल गर्न सक्नु प्राय असम्भव नै हुन्छ । राेचक क्ररा याे छ कि यदी कुनै स्तनधारी जनावरले मानिसकाे बाेली नक्कल गर्न सक्छ भने त्यसमा सबैभन्दा राम्राे समुद्री जनावर गर्दछ । शोधकर्ताहरुले यसकाे पहिलाे चाेटी परीक्षण गर्दा मरीन पार्क चुनेका थिए ताकि सजिलै संग ह्वेलमा परीक्षण गर्न सकियाेस । पहिला उक्त ह्वेललार्इ मान्छे ले बाेल्ने सामान्य शब्द बाेल्न लगाइयाे र विस्तारै रेर्कड गर्न थालियाे । जुन कुरा ह्वेलले स्पस्ट रूपमा भन्न सक्थ्याे । किलर ह्वेलले हलो, एमी र वन, टू, थ्री जस्तै शब्द सीटहरु र अलग-अलग आवाजहरुमा बोल्न थाल्याे ।
यी यस्ता ह्वेलहरू हुन जाे समुहमा बस्छन र अाफनाे छुट्टै किसिमले एकअापसमा सन्चार गर्दछन । डा. कल भन्छन , हामीले यस्ताे ह्वेमा अध्ययन गर्याै जसले बाहिरी अावाज नक्कल गरेर बाेल्न सक्छ । याे अध्धयनका अनुसार एउटा ह्वेलले अर्काे ह्वेलकाे नक्कल गर्छ र अाफैमा विकसित गर्दछ । यसले सजिलै संग मान्छेकाे नक्कल गर्न सक्छ, संसारकै दुर्लभ जनावरहरूमा पर्दछ ।
अध्ययनले डल्फिन र बेलुगा जातका व्हेलहरले एक-दोश्रोकाे र अन्य जनावरकाे अावाज नक्कल गर्न सक्ने बताउछ ।
ह्वेल मर्नका लागी किन समुद्र किनारमा अाउँछ ?
केहि पक्षी, जस्तै सुगा र केहि काग प्रजातिहरूले मान्छेहरुको बोली नक्कल गर्न सक्छन ।हाे यस्तै तरीका ले अध्ययन गर्ने हाे भने एर्क दिन ह्वेल माछाहरू संग पनि एकदिन साधारण कुराकानी संम्भव हुनसक्ने वैज्ञानिक हरू बताउछन । यस्ताे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्रे पैरटले पहिला पनि संम्भव गरेका थिए ।उनले डल्फिन संग अमेरीकि सांकेतिक भाषामा याे सामान माथि राख अर्थात तल झार जस्ता करा गरीएकाे थियाे ।
स्पेन स्थित कम्प्लन्सस विश्वविद्यालयका डा. जोस अब्राम्सन भन्छन्, ” हामिलाई जनावरहरुमा मानवीय अवधारणाहरु थुपार्न अातुर भइरहेका छाै तर यदी हामीले हामीले अाफनाे भाषा जनावर लार्इ सिकाउनुभन्दा उनहरूकाे भाषा अाफुले सिक्ने हाे भने झन फाइदा हुनेछ ।
सामान्यतया ह्वेल अाफनाे मुख बाहिर राखेर अावाज निकाल्ने गर्दछ । पानी भित्र भित्र को आवाज केहि अलग हुन सक्छ। तर यो अध्ययन केवल एक व्हेलमा मात्र गरीएकाे छ, त्यसैले अध्ययनकर्ता हरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन कि एउटा ह्वेलकाे अावाज तिन या बढीले नक्कल गर्न सक्छन कि सक्दैनन । किलर ह्वेल डल्फिन प्रजातिको सबैभन्दा ठूलो र संसारको शक्तिशाली सिकारी मध्ये एक मानिन्छ । यो सील र सी लायन जस्ता समुद्री जीवहरु को शिकार गर्नमा माहिर हुन्छ ………………….
प्रकाशित : शुक्रबार, माघ १९, २०७४१७:५४
विश्वभर भाइरल भयो यो अजंगको कुखुरा ! कारण थाहा पाउनु भएमा चकित पर्नुहुनेछ ! [भिडियो सहित]
सिन्डिकेटधारी चालकले गरे जापानमा हड्ताल!नयाँ यातायात कम्पनीलाई अनुमति दिएकोमा बिरोध!
आफ्नै श्रीमतीलाई सेक्स गर्न लगाएर पाहुनाको स्वागत !
जापान काण्ड : नशाको तालमा पोर्न खिच्ने, होस आएपछि माफि ?
नेपालकै यो सडक जहाँ सडकमा भेटिदैनन् अशक्त!